पवित्र वस्तु खादामा किन यस्तो राजनिति? - Gokarna News
पवित्र वस्तु खादामा किन यस्तो राजनिति?
बुधबार, असोज ३१, २०७५ by Gokarna News
– मोहनगोले तामाङ
बौद्ध धर्मावलम्बी र अन्य समुदायले समेत विभिन्न शुभकार्यमा स्वागत,सम्मानको लागि प्रयोग गरिने वस्तु खादा हो । यो सेतो, रातो, पहेँलो, निलो र हरियो रंगको हुन्छ । भिन्नाभिन्नै रंगले भिन्नाभिन्नै महत्व दर्शाउँछ । खादाको साईज भने कुनै लामा हुन्छन् त कुनै छोटापनि हुन्छन् ।
नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि यसको प्रयोगमा ब्यापकता आयो । यसलाई बौद्ध धर्मावलम्बीबाहेक गैर बौद्धधर्मावलम्वीले समेत विभिन्नशुभकार्यमाप्रयोग गरे । लगभग तीन दशकखादामा सबैको साझावस्तु बन्यो, कसैले यस सम्बन्धमा प्रश्न उठाएनन् । तर पछिल्लो चरणमा बुझेर या नबुझेर केहीमान्छेहरु खादाबहिष्कार गर्ने देखिए यसको सट्टामा ढाकाको गलबन्दीसमेत प्रयोग गर्न थालेका छन्। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा यसबर्ष बुद्धकै जन्मस्थललुम्बिनीमा समेत थाककाथाक ढाकाको गलबन्दी पु¥याएको देखियो ।
देशकै कार्यकारी प्रमूख प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममा खादाको भरमग्दुरविरोध गरे । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सुनकोशीगाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष नेत्रबहादुर कार्कीले पनि आफ्नो वडा क्षेत्रभित्र खादा प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाए। उनको यो निर्णयको संसारभरिका तामाङ संघ/संस्थाहरुबाट सर्वत्र आलोचना भयो । केही समय अघि चितवन जिल्लास्थित एउटा पार्टीको कार्यक्रममा पनि खादाबहिष्कार गरेको भन्ने सुनियो । यसको पनि त्यस समयमाविरोध भएको थियो ।
वास्तवमा यति लामो समयसम्म सबैले स्वीकार गरेको पवित्रवस्तु खादामाथि पछिल्लो चरणमा किन प्रहार भइरहेको छ ? यसरी निरन्तर राजनीतिकरुपले प्रहार हुनु भित्रको उद्देश्य के हो ?खोजीको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्रीले खादाबाट प्रदुषण हुने आशय ब्यक्त गरेका थिए भने वडा अध्यक्ष कार्कीले जारी गरेको पत्रमा स्थानीयफूल, दुबो, गुराँस, सुनाखरीलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने उल्लेख थियो । केहीले विदेशी वस्तु आयात नगरेर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने हास्यास्पदनारा लगाए । जुन देशमा सियो देखि नूनसम्म र कन्दनीदेखि बाहुनले फेर्ने जनै धागो सम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ भने एउटा वस्तु खादाको प्रतिवन्धलगाएर कति पैसा बाहिर जानुबाट रोक्नु खोजेको हो?सामान्य चेतले नबुझ्ने कुरो यो छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि प्रधानमन्त्री बाणी देखि वडाअध्यक्षको उर्दी सम्म दुवैको भित्रि सार उद्देश्य भनेको संस्कृति माथिको नाङ्गो आक्रमण हो । स्थानीयताको प्रवद्र्धन र प्रदुषणको कुरा त दुनियाँलाई देखाउने तिनको बहानावाजी मात्र
खादामा कुनै धर्म वा समुदाय विशेषको बर्णन गरिएको नभई समस्त प्राणी हितको लागि शुभ शब्दहरु लेखिएको हुन्छन् ।त्यहाँ शुभचित्रहरु कोरिएका हुन्छन् । खादामा लेखिएको अक्षर सम्भोटा लिपिको हुँदैमा भोटे अक्षर हो भनेर कोही तर्सिनु पर्ने कारण छैन
जसले खादाको महत्वलाई बुझ्न सकेनन् । खादामा अंकित सांकेतिक शुभचिन्हहरु र सम्भोटा लिपिमा लेखिएका शुभअक्षरहरुलाई बुझ्ने कोशिस नगर्दा ब्यर्थमा एकाथरी मान्छेहरु खादाको विरोध गरिरहेका छन् । खादामा कुनै धर्म वा समुदाय विशेषको बर्णन गरिएको नभई समस्त प्राणी हितको लागि शुभ शब्दहरु लेखिएको हुन्छन् ।त्यहाँ शुभचित्रहरु कोरिएका हुन्छन् । खादामा लेखिएको अक्षर सम्भोटा लिपिको हुँदैमा भोटे अक्षर हो भनेर कोही तर्सिनु पर्ने कारण छैन । त्यसो त अंग्रेजी अक्षरदेखि झनै तर्सिनुपर्ने हो ।
बौद्ध धर्मग्रन्थपहिले भारतका पण्डितहरु नै तिब्बत पुगेर अनुवाद गरेका हुन् । नालण्डा विश्वविद्यालयका थुप्रै आचार्यहरुको यसमा ठूलो भूमिका छ । पछि तिब्बतकाअनुवादकहरु भारत गएर संस्कृत र पाली भाषा अध्ययन गरी तिब्बती भाषामा अनुवाद गरेपछि यसले अझब्यापकता पायो । यस माभारतका महासिद्ध गुरु पद्मसम्भवको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ । सातौ शताब्दीदेखि सुरु भएको अनुवादबाट तिब्बतमा धेरै धर्मग्रन्थहरु तिब्बतीभाषामा अनुवाद भए । त्यही लिपिमा तयार भएको ग्रन्थहरु नेपालमा आयो ।
नेपालको नश्लीय राज्यब्यवस्थाले यसको आफ्नै देशीय भाषामा अनुवाद गर्ने ब्यवस्था मिलाएन । सम्भवत यो ब्यवस्था मिलाएको भए हामी आज आफ्नै लिपिमा पढ्न पाउँथ्यौहोला । त्यसैले कुनलिपिमा लेखियो भन्दापनि के लेखिएको छ ?त्यो पक्षमहत्वपूर्ण हो । बाहुनले ओढ्ने रामनामीबर्कोमा संस्कृत भाषाबाट मन्त्रहरु लेखिएका हुन्छन् । संस्कृत भाषाको अक्षर देख्दैमा अर्को भाषा बोल्ने समुदाय तर्सिनु पर्दैन । यो धर्म निरपेक्ष, संघीय, गणतान्त्रिक मुलुकको बहुलता भित्रबस्ने जनताले सोच्ने चित्तहोइन । मुख्यतःत्यहाँ के लेखिएको छ भन्ने कुरोको चुरो खोज्नु जरुरी छ । यतिबुझ्ने प्रयत्नग¥यौभने धार्मिक, साँस्कृतिक सहिष्णुताको प्रवद्र्धनमा टेवापुग्नेछ ।
खादालाई बुद्धको न्हाम्साअर्थात पवित्र वस्त्रको रुपमा लिइन्छ । खादामा सम्भोटा लिपिमा निम्न शान्ति र सुभ शब्दहरु लेखिएका हुन्छन्ः (१) टासी देलेक फुन्सुम छ्योकऊ (यसको अर्थ होः सुख, शान्ति, शुभ राम्रो कुराले सधैं भरिपूर्ण होउन्) । यसमा अरु थप आशिर्वादहरु पनि लेखिएका हुन्छन्ः(२) ङिन्मो देलेक छेन्देलेक, ङिम्हे घुङयाङ देलेग सिङऊ (यसको अर्थ होःबिहानको शुभ, मध्यदिनको शुभ र रातको शुभरहोस्) । (३) ङिन्छेन् ताक्तु देलेगपा, कोन्छ्योग सुम्गी टासी श्योगऊ (यसको अर्थ होःदिन र रात सबै राम्रो भई त्रिरत्नको शुभ रहोस्) । (४) पोन्लोप मिडल ल्हेन्चीघ ढोघ, कुछे मिग्युर स्रा तेन्ङा, स्हाङ्से टोग्युन मिछेकीला छ्योइफेल टाशी श्योगऊ (यसको अर्थहोः गुरु मण्डल र हामीबीच केही गडबढी नभई सधैं मित्रता र साथरहिरहोस्, आयु र शरीर कहिल्यै नष्ट नहोस्,गाँजबलियो एवम् अटल होस्, राम्रो होस्, हृदयदेखि नै कर्म गर्न मन लागिरहोस्,अनन्तसम्म सुख, शान्ति र धर्म फैलिएर जाओस्) । यस्तापुन्य, शुभशब्दहरु खादामा लेखिएका हुन्छन् ।
यसको साथ ैकतिपय खादामा ओम मणि पद्मे हुँह्री जस्तो मन्त्रपनि लेखिएको हुन्छ । जसअनुसार (१) ओमको अर्थ मन, वचन र शरीर शुद्ध हुने हो । (२) मणिको अर्थ अमूल्य रत्न हो । (३) पद्मेको अर्थ कमलको फूल हिलोमा फुलेर पनि शुद्ध रहने हो । (४) हुँको अर्थ मणि र कमलजस्तो हो र (५) ह्रीको अर्थ स्वयम् अवलोकेतेश्वरको चित्तहो । यो मन्त्रको जपगर्नाले समेत देवलोक, असुरलोक, मनुष्यलोक, पशुलोक, प्रेतलोक र नर्कलोकमा पुर्नजन्म लिनुपर्ने कष्टको ढोका बन्द हुन्छ भनिएको छ । विद्वान राजनीति विश्लेषक प्रा. डा. सुरेन्द्र केसीले त ओम मणि पद्मे हुँको मन्त्र समेत प्रकृति पुजकखसहरुको हो भनेर दाबीगर्नुभएको छ । तसर्थ, यस्तो तन्त्र÷मन्त्र युक्त खादा लगाउने मान्छेको सधैंभरि कल्याण हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ ।
त्यसैगरी खादामा अष्ट मंगलम्को चित्रपनि छापिएको हुन्छ । ती अष्टमंगलचित्रको अर्थ यसप्रकार छन्ः (१) धुक (ह्रिन्छेन धुक)ः छाता अर्थात भगवानको छाता जो ज्ञानको सागर भएको व्यक्तित्वलाई ओढाइने गरिन्छ । (२) सुनको माछा (सेर्गी ङ्या)ःशुभको प्रतिक हो । (३) बुम्बा अर्थात कलश(घोइम्युङ)ः सम्पूर्ण इच्छा प्राप्तीहुने । (४) कमल(इहोङ कमल)ः हृदयआनन्दितपार्ने । (५) शंख (ङ्यान्डक धुङ)ःशक्तिशालीश्रवण अर्थात धर्मको ध्वनीवाआवाजगुञ्जिने । (६) स्वस्तिकचिन्ह(पल्बेहु)ः प्रेमको कहिल्यै अन्तनहुने अर्थात इच्छाएको प्राप्तीहुने र धेरै राम्रो हुने । (७) छाता (घ्याल्छेन)ःमानव जीवनको कहिल्यै अन्त्य नहुने र(८) धर्मचक्र÷खोर्लो (वाङ्ग्युर)ः शक्ति फैलाउने । यस्तो महत्वपूर्ण शुभमंगलका संकेत चित्रहरु खादामा छापिएको हुनाले यसबाट ऊ दुःखमा पर्नु पर्देन ।
खादालाई केवल आतिथ्यता मालाको शोभा दिनको लागि प्रयोग गरिने वस्तुको रुपमा मात्र नबुझौं । यसको धार्मिक, साँस्कृतिक र सामाजिक महत्व छ
यसको साथै खादामाप्रयोग हुने पञ्चरत्नको पनि छुट्टाछुट्टै अर्थ र महत्व छ । (१) निलो रंग आकाशको प्रतिक हो । (२) पहेंलो रंग जमीन वा माटोको प्रतिकहो । (३) रातो रंग अग्निको प्रतिक हो । (४) सेतो रंग बादलको प्रतिक हो र(५) हरियो रंग जंगलको प्रतिक हो । पञ्च रंगले पाँच भौतिकतत्व (जो मानवजीवनको सृष्टिसँग सम्बन्धित छ) को बोध गराउँछ ।
तसर्थ,मानव कल्याणको लागि यस्तो महत्व बोकेको खादा बहिष्कार गर्नु भनेको शुभ संकेतलाई नै लत्याउनु हो ।शुभलाई अस्वीकार गरियो भने अशुभ मात्र भोग्नुपर्छ । यसको विकल्पमा ढाकाको गलबन्दी प्रयोग गर्नुको त अझकुनै अर्थ छैन । यति महत्वपूर्ण मन्त्रहरु लेखिएको खादासँग ढाकाको गलबन्दी तुलना गर्नै मिल्दैन ।ढाकाको फूलबुट्टा देख्दा आँखालाई एकछिन तिरिमिरी पार्छ, त्यतिहो । यसबाट कुनै शुभहुँदैन । बरु यसमाप्रयोग गरिएको कृतिम लेपनवाला रंगले घाँटी चिलाउने र एलर्जी हुने सम्भावना बढ्छ । त्यसकारण खादालाई केवल आतिथ्यता मालाको शोभा दिनको लागि प्रयोग गरिने वस्तुको रुपमा मात्र नबुझौं । यसको धार्मिक, साँस्कृतिक र सामाजिक महत्व छ । सबैले बुझ्ने प्रयत्न गरौ ।
लुटनुभन्दा पहिले लुटेरा समूह समातिएपछि